अयोध्याधाम बहसः के भन्छन् माडीका युवाहरु ? - Narayanionline.com
अयोध्याधाम बहसः के भन्छन् माडीका युवाहरु ?
प्रस्तुति – नारायण सापकोटा
सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले भानु जयन्तीको अवसरमा रामको जन्मस्थानको सम्बन्धमा दिनुभएको अभिव्यक्ति यतिबेला देशभर नै चर्चाको विषय बनेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु, सामाजिक व्यक्तित्व, महिला अगुवा, धार्मिक व्यक्तित्वहरु, पर्यटन व्यवसायीहरुले अयोध्याधामको निर्माणको विषयलाई विकाससँग जोडेरे आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यो विषयलाई माडीको समग्र विकास गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने धारणा पनि आइरहेको छन् । यो अवसरका समृद्ध माडी बनाउनको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज, चेपाङ बस्ती, रिउ करिडोर, सुकुम्वासी समस्या, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षाका समस्याहरु समाधान गर्ने गुरुयोजनासहित अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धेरैको मत रहेको छ । माडी नगरपालिका र अयोध्या अध्ययन,अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन समिति पनि त्यसैअनुसार अगाडि बढेका छन् । रामधाम निर्माणका विषयमा बहस चलिरहँदा आएका विचारहरुलाई सङ्कलन गरी सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा यसपटक माडी विकास गर्ने अभियानमा लागिरहनुभएका युवाहरुको विचारलाई समावेश गरिएको छ । बहसका क्रममा आएका नयाँ विचारहरुलार्ई समावेश गर्दै जाने लक्ष्य पनि रहेको छ ।
भीम महतो अध्यक्ष, थारु कल्याणकारिणी सभा , माडी –
विकासमा पछाडि परेको माडीलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिएर रामधाम निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाउनु स्वागत योग्य कार्य हो । यसले माडीको पर्यटन प्रबर्धन गर्नुका साथै समग्र विकासका आधार तयार हुन्छन् भन्ने मलाई लागेको छ ।
माडी आफैंमा प्राचिन विषयवस्तुसँग जोडिएको पावन भूमि हो । यहाँका वाल्मीकिदेखि ठोरीसम्मका स्थलहरुलाई अध्ययन गर्दा धार्मिक पर्यटन विकास गर्ने प्रशस्त आधार छन् । तरपनि ती स्थलहरुको सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सकिएको छैन् । यतिबेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको अग्रसरतालाई हामीले सम्मान गर्दै विकासका योजनाहरु अगाडि ल्याउनुपर्छ । हामीले यसलाई विकास गर्ने आधारको रुपमा लिएका छौं । यसले जनताको आय आर्जन पनि बढाउँछ ।
राममन्दिर निर्माण गर्दा अन्य विकासका योजनाहरु ओझेलमा पर्छन कि भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरिएको छ । राज्यले विभिन्न योजनाहरु एकैसाथ अगाडि बढाउन सक्छ । त्यसैले रामधामले विकासका योजना पछाडि पार्ने कुरै होइन्, यो त माडीको समग्र विकास गर्ने अवसर हो । त्यसैले समृद्ध माडी बनाउने परिकल्पना अनुसारको गुरुयोजना तयार गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
सन्तोष पनेरु , केन्द्रीय सदस्य, युवा संघ नेपाल –
प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएर राम मन्दिर बनाउने विषयको विरोधी म होइन् । कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुनुका नाताले बहुसङ्ख्यक जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै उहाँहरुको धार्मिक आस्था र कार्यलाई अनादर गर्ने उद्देश्य पनि होइन् । तर रामधाम बन्दैमा माडीको समग्र विकास हुन्छ भन्ने विश्वास पनि छैन् ।
माडीमा तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरु छन् । चेपाङ्हरुको घरमा आगलागी भएर सरकारकोे तीब्र आलोचना पनि भइरहेको समयमा जनताका समस्यालाई सम्बोधन नगरी रामधाम निर्माणको योजना आउनु निकुञ्जका ऐनहरु संशोधन र व्यवस्थापनलाई छल्ले नियतले आएको हो कि भन्ने मलाइ लागेको छ ।
रामधाम बनाउनको लागि बाधक बन्ने निकुञ्जका ऐनहरु संशोधन गरी ५० बिगाह जग्गा छुट्याएर एक अरब जतिको वजेट र त्यसको डिपिआर पास गराएर ल्याएमा सबैले सम्मान गर्लान् । यो काम गर्न सरकार तयार होला ? जनविश्वास लिएर प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भने धार्मिक पर्यटनको विकास गर्ने कार्यमा मेरो सहमति हुनेछ । तर यतिबेला राममन्दिर निर्माण गर्नुभन्दा पहिला माडीमा उत्पीडनमा परेका मानिसहरुको समस्या कति छ , त्यसको मूल्याङ्कन गरेर तत्काल समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
यमनाथ सुवेदी , नगर सचिव ,नेपाली कांग्रेस, माडी –
माडीमा धार्मिक र पुरातात्विक महत्वका स्थलहरुको अध्ययन गरी स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नै धार्मिक महत्वका विषयमा चासो दिएर विषय उठान गर्नु सकारात्मक कार्य हो । यसलाई अवसरको रुपमा लिएर पर्यटन विकासका कार्यहरु अगाडि बढाउनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । माडी विकासको आवश्यकताबाट हेर्दा यसलाई विकास गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ यो अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
माडीमा निकुञ्जलगायतका तमाम समस्याहरु पनि छन् । ती समस्याहरु पनि सम्बोधन हुने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ । आश्वासन दिने र वजेट छर्ने काम हुनु हुँदैन । काम सम्पन्न गर्ने श्रोत र आधार तयार गरेर काम गर्नुपर्छ । रामधाम निर्माण गर्ने विषयमा माडीवासीहरु एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।
नेत्र काफ्ले , नगर कमिटि सदस्य ,नेकपा, माडी –
रामधाम बनाउने विषयलाई लिएर राष्ट्र प्रमुखको ध्यान माडीमा आउनु सकारात्मक कार्य हो । पार्टीका दुवै शीर्ष नेताले माडीलाई मणि बनाउने उद्घोष गरेको लामो समयपछि प्रधानमन्त्रीले माडीको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ आएको विषय माडीलाई मणि बनाउने आधार पनि हो भन्ने लाग्छ ।
निकुञ्जको ऐन संशोधन नगरी माडीमा रामधाम बन्ने आधार तयार हुँदैन । त्यसैले जनविरोधी निकुञ्ज ऐन संशोधन गरी काम अगाडि बढ्यो भने अन्य विकासका पुर्वाधारहरु अगाडि बढाउने बाटो खुल्छ । प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिएको विषय भएकोले निकुञ्ज ऐन संशोधन होला भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ ।
रामधामको निर्माणले विकासका आधारहरु तयार गर्छ भने बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग गर्छ । यो विषय विशेष गरी पर्यटन विकास गर्ने आधार भएकोले माडीबाट वाल्मीकि आश्रम जाने सडक बनाउनुपर्छ । माडीका परशुराम कुण्ड, गोद्धकनाथ, सोमेश्वर, वैकुण्ठेधाम लगायतका स्थलहरुको विकास गरी पर्यटकहरुको लागि आकर्षण केन्द्र बनाउनुपर्छ । समग्रमा भन्दा प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभएको विषयलाई अवसरको रुपमा लिएर माडी विकासमा लाग्नुपर्छ ।
हितमान गुरुङ , अध्यक्ष चितवन, नारायणी संयुक्त उपसमिति , माडी–
प्रधानमन्त्रीले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरेर माडीमा अयोध्याका प्रसङ्ग ल्याउनु सकारात्मक कार्य हो । यो विषय माडी विकास गर्ने योजनासँग सम्बन्धित रहेकोले अवसरको रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । रामधाम निर्माणको विषय माडीको मात्र होइन राष्ट्रकै पर्यटन विकास गर्ने विषय हो । यो विषय पर्यटनसँगै समग्र माडी विकास गर्ने आधार हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
रामधाम निर्माणको विषयले धर्म, कला, संस्कुति संरक्षण गर्नुका साथै रोजगारका आधारहरु तयार हुन्छ । त्यसैले यो अभियानलाई सहयोग गर्न हामी यातायात व्यवसायीहरु तयार रहेका छौं । यतिबेला नारदमणि पौडेलको संयोजकत्मा बनेको अयोध्या अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छ । अध्ययन समितिलाई सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हो । अव यो विषयलाई सरकारले अग्रसरता लिएर काम अगाडि बढाउँनुपर्छ ।
क्षेत्र देवकोटा , सल्लाहकार, चितवन युवा समूह अन्तराष्ट्रिय समन्वय समिति –
पार्टीका दुबै अध्यक्षहरुले माडीलाई मणि बनाउँछौं भनेर घोषणा गरिसकेको भएतापनि त्यसका आधारहरु तयार भएका थिएनन् । यतिबेला राष्ट्रप्रमुखबाट नै अग्रसरता लिएर रामधाम निर्माणको विषय आउनु माडीलाई मणि बनाउने आधारका रुपमा आएको हो भन्ने मलाई लागेको छ । माडीमा पर्यटन विकासका अनेकौं सम्भावनाहरु रहेको सन्दर्भमा आएको रामधाम निर्माणको विषयले राष्ट्रकै पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्छ । त्यसैले माडीलाई पर्यटकहरुको आकर्षण केन्द्र बनाउन सकियो भने विकासका ढोकाहरु खुल्ले आधार तयार हुन्छन् । यो विषय विकास र आस्थासँग जोडिएको विषय हो ।
माडीमा रामायण र महाभारतकालिन विषयसँग जोडिने धेरै आधारहरु छन् । ती स्थलहरुको प्रचारप्रसार गरी अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सकियो भने माडी आस्थाको केन्द्र बन्ने आधारहरु छन् । त्यसैले आस्था र विकासँग जोडिएको यो अभियान सफल बनाउनुपर्छ । यो अभियानलाई अगाडि बढाउँदा माडीका निकुञ्ज, चेपाङ्बस्ती, सुकुम्वासी, बाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका समस्या समाधान गर्ने मार्गचित्र तयार गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यो विषयलाई विवादभन्दा पनि छनफलको विषय बनाएर विकास कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
ई.सूर्यबहादुर भण्डारी, माडी ८ चितवन –
प्रधानमन्त्रीले विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरेर माडीमा रामधाम बनाउने विषय सार्वजनिक गर्नुभएको हो । माडी विकास गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्र प्रमुखबाट नै अग्रसरता लिने कामलाई मैले सम्मान गर्दै सकारात्मक रुपमा लिएको छु । माडीमा धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थानहरु धेरै भएकाले पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसको लागि वाल्मीकि आश्रमदेखि ठोरीसम्मका स्थलहरुको स्तर उन्नतिको लागि गुरुयोजना तयार गरेर अगाडि बढुनुपर्छ ।
माडीमा निकुञ्ज, यातायात, रोजगार आदि क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरु छन् । ती समस्याहरुलाई समाधान गर्दै समृद्ध माडी बनाउने आधार भएकोले यसलाई अवसरका रुपमा लिएर अगाडि बढुनुपर्छ । रामधामको योजना विकास, आस्था र रोजगारसँग सम्बन्धित भएकोले युवा वर्गमा पनि उत्साह थपेको छ । यसबाट विकासका कार्यहरु अगाडि बढेर रोजगारका अवसरहरु पनि सिर्जना हुन्छन् ।
टि.आर सुवेदी, वडा सचिव, नेकपा, माडी नगरपालिका १ –
प्रधानमन्त्रीज्युले रामधाम माडीमा बनाउँनुपर्छ भनेर गर्नुभएको पहललाई हामीले माडी विकासको आधारको रुपमा लिएका छौं । अझ गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने माडीलाई मणि बनाउने आधारका रुपमा आएको योजना हो भन्ने मलाई लागेको छ । यसलाई अवसरकै रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
यसले पर्यटन विकासमा नयाँ आयाम थप्नेछ । त्यसैले वाल्मीकि आश्रमदेखि ठोरीसम्मका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको विकास गर्दै पर्यटकका लागि गन्तव्य स्थल बनाउनुपर्छ । यो योजना विकास र रोजगारसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले सफल बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।
दिनेश्वर महतो , सचिव , ललितकला प्रतिष्ठान चितवन –
प्रधानमन्त्रीले चासो दिएर रामधाम निर्माणको विषय अगाडि बढाउनु स्वागत योग्य विषय हो । यसले पर्यटन विकासमा कोशेढुङ्गा बन्ने र माडी विकासको आधार तयार हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसलाई पुरातत्व विभागले सक्रियता लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
माडी प्राकृति हिसावले पनि सुन्दर स्थल हो । सुन्दर स्थानमा बन्ने धामले माडीको सुन्दरता थपिन्छ । पर्यटकहरुको आकर्षण केन्द्र बनेर कला संस्कृतिको पनि विकास हुन्छ । त्यसैले यो कला, संस्कृति र सौन्दर्य विकास गर्ने आधार हो । कलाकारको तर्फबाट धामलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउने कार्यमा हाम्रो सहयोग हुनेछ । यसबाट पर्यटन व्यवसायमा नयाँ फड्को मार्दै समग्र माडी विकास गर्ने माध्यम पनि बन्ने आसा पनि लागेको छ ।
माडीमा वाल्मीकि आश्रम, परशुराम कुण्ड, गोद्धकनाथ, भीमसेन इनार , पाण्डवनगर, सोमेश्वर, वैराठ धुनी, वैकुण्ठे धाम सीताराम गुफा लगायतका धेरै धार्मिक स्थलहरु छन् । यी स्थलहरुको विकासमा पनि ध्यान जानुपर्छ । पर्यटकहरु रमाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यसले सबैको कला संस्कृतिको संरक्षण गर्दै रोजगारीको पनि व्यवस्था हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
चितवनको माडीमा सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीः मन्त्री आफैले रोपेको धान आफै काटे
राजनीतिसँगै बाख्रापालनमा माडीका नीलकण्ठ काफ्ले
निकुञ्जले घर जलाएको चेपाङ परिवारलाई नेफिन आइसीसीको सहयोग
चितवनको माडीमा बन्ने पाँच तले भ्यु टावरको डीपीआर बन्यो, गोलालघाटसम्मको दृश्य हेर्न सकिने
माडीमा बन्यजन्तु धपाउन लगाइएको करेन्ट लागेर एकको मृत्यु
माडी अयोध्याधाम बहसः के भन्छन् चितवनका स्थानीय सरकार प्रमुखहरु ?
राष्ट्रिय युवा सङ्घ केन्द्रीय कमिटीले पायो पूर्णता, चितवनबाट चार जना बने केन्द्रीय सदस्य
रत्ननगरमा औपचारिक रुपमा राहत वितरण सुरु
कर छुट गर्न नवलपरासीका सिलाई व्यवसायीहरुको माग
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रमलाई महाअभियोग
विदेशबाट नेपाली ओइरिदै, बुधबार नौ सय बढी नेपाली फर्किए